Ma VLC aan ciyaaro MP4 Videos? Ma jiraa wax dhibaato, runtii adiga oo aan ka war? Waxaad tahay in dhibaato, waxa keenaya Video MP4 ma ordi VLC Player ? Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah sababaha oo VLC ma ciyaari karo qaar ka mid ah files mp4. Waxay kale oo ay ka wada hadleen sida soo socota.
Qeybta 1: Qaar ka mid ah sababaha taas oo VLC ma ciyaari karo qaar ka mid ah files mp4
Qeybta 2: Hab-diinta ee MP4 File in .avi format
1.Reason: ha Video MP4 waa musuqmaasuq ama been abuur ah
Xalka: Waxaa jira xal ma ka fiirsaneysa inay dhinaca VLC. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa inaad kala soo baxdo Video MP4 ee saxda ah, taas oo aan musuqmaasuq iyo oo laga yaabaa in lagu shaqeeyo ganaax.
2.Reason: ha VLC "video saarka hababka" ayaa lagu wadaa qaldan.
Xalka: In xaaladan, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inay reserved X Server si sax ah. Just arkaan Shaashada ee la mid ah.
Fur VLC, u tag Tools, oo guji aad rabtid. Tag qaybta Video iyo awood Video, haddii ay dhacdo waa un-riixi. Markaas Fiiri sanduuqka u qurxinta Window, haddii ay tahay un-riixi. Markaas dhigay hoos-hoos menu Output in X11 video saarka (XCB) iyo badbaadin isbedel iyo guuleysatey aad VLC Player isbedelada in uu yimaado wax ku ool ah.
Kor ku xusan si dhekhso dhammaataan aad sharxayaa, oo ku saabsan sida loo sameeyo iyo aad u hesho file ee ay maamusho si habsami leh ku VLC.
3.Reason: Dhibaatada codec MP4 video laga yaabaa in sababta saddexaad taas oo VLC Media Player ma ciyaari MP4.
Xalka: Dhab ahaantii, MP4 waa qaab weel video oo guud ahaan ka kooban yahay tiro ka mid ah audio, video, iyo durdurrada Cinwaan. In xaaladda, Haddii file MP4 ah ku jira a VLC leheyn video codec, waa baabbi'i doonaan inuu ka ciyaaro VLC.
Xaaladdan oo kale, waxaan u baahan nahay si loogu badalo MP4 in VLC qaab video taageero dheeraad ah. Waayo, kan aad u baahan tahay si ay u isticmaalaan Wondershare Video Converter Ultimate. Waa xalka ugu fiican yahay xalka ugu fiican ee dhammaan noocyada diinta. Waxaa si dhab ah u bedeli karaan, xaalkaa, kor loogu qaado, download, gubi, abaabulo, qabashada, oo ay daawadaan in ka badan 150 qaabab. Waa wax aad u badan oo kaliya Converter ah iyo mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu awooda badan, taas oo hubi inaad buuxiso dhammaan baahida qaab beddelidda, video iyo iman karo inay ku kaalmeeyaan siyaabo badan oo kale.
Waa xalka loogu video qaab beddelidda 30x dhaqso, oo uu leeyahay kala duwan ee waafaqid.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in aad ku darto faylka loogu tala galay ujeedada diinta iyo doortaan qaab wax soo saarka, kaas oo ah inuu noqon doono ah. avi kordhin natiijada ugu fiican ee vlc. Xitaa in aad qabsato karaa heerka jir iwm, haddii kale, waxaa lagu wadaa in lagu mutaysanayo gudasho la'aanta. Markaasay aad u baahan tahay in guji diinta, joogo dhinaca gacanta midigta ee interface ee dhinaca hoose oo aad la kulmi doontaa video helay badaley waqti degdeg ah. Hadda, aad ku raaxaysan kartaa video in vlc iyo yeelan karaan waayo-aragnimo ugu fiican ee VLC.
Halkan si dhekhso ah, awoodo aad fikrad ah geeddi-socodka ah ee diinta ka mid ah file in qaab kasta oo kale iyadoo la adeegsanayo Wondershare Video Converter Ultimate.
Sida loo Play buufiyaha Files Audio la VLC?
Sida loo sameeyo VLC ciyaaryahan default
Sida loo beddel XMBC Default in VLC Player?
> Resource > VLC > Xalka on MP4 Video ciyaareynin on VLC Player